Christian Eriksen oo ku soo wajahan horyaalka Premier League, Kooxda uu ku biirayo & Saacadaha lagu dhammaystiri karo heshiiskiisa – Gool FM
(London) 23 Jan 2022. Christian Eriksen ayaa lagu soo warramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu soo dhaqaaqo horyaalka English Premier League sida ugu macquulsan uguna dhaqsiyaha badan.
Eriksen waxa uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda Brentford ee ka dhisan Galbeedka Magaalada London, waxaana xiddiga xulka qaranka Denmark laga yaabaa in heshiiska uu ku aadayo Premier League la dhammaystiro 72-ka saacadood ee soo aaddan.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaya in Christian Eriksen uu qarka u saaran yahay inuu dib ugu soo laabto horyaalka Premier League, isla markaana uu ka mid noqdo saacadaha soo aaddan Naadiga Brentford.
Xiddiga xulka qaranka Denmark ayaa u baahan kaliya inuu ka gudbo tijaabada caafimaad ee uu u marayo kooxda lagu naynaaso Bees si uu u dhameystiro heshiiskiisa, taasoo la xaqiijin karo 72 saacadood ee soo aaddan.
Eriksen ayaa la xusuustaa inuu jooga ka dhacay isagoo qeyb ka ahaa kulan koobka qarammada Yurub ah, waxaana uu horay ugu soo ciyaaray kooxda Tottenham waana mid garanaya horyaalka Premier League & Magaalada London.